Pakistana: Sanganehana Tamin’ny Fandraràna ny Google Adsense Ny Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2011 3:30 GMT
Nahasanganehana ireo bilaogera Pakistaney ny fandraràna tao amin'ny kaonty google adsense. Trano mpamokatra boky am-polony no lasibatry ny hetsika mikendry famaizana an'ireo tranokala sy bilaogy hosoka.
Sary avy amin'i Yasir Imran: Fitakiana ho fanajanonana ny fampiasana google tamin'ny alalan'ny hetsika.
Niteraka fahatezerana teo amin'ireo bilaogera manerana ny firenena izany — niraiki-tapisaka lalina tamin'ny famaizana natao tsy nisy fampilazana mialoha ny fahatezeran'izy ireo, izay fepetra mahazatra fanaon'ny Google.
Lasa lavitra mihitsy ny sasany mihoatra ny fanoherana ny google ary nanolo-kevitra fa vokatry ny fanehoan-kevitra vao haingana nataon'ny Minisitry ny Atitany Rehman Malik no anton'izao. Tamin'ny resaka nataony tamin'ny fampahalalam-baovao, nanao fanamarihana mahatsikaiky Andriamatoa Malik, nilaza tetikasa afaka atao amin'ny ‘mpitantana ny google’ raha toa ka mandà hankasitraka ny fangatahana momba ny “teny iditra” nataon'ny Sampan-draharahan'ny Fanadihadiana Federaly (FIA). Ity manaraka ity ny lahatsary misy ny fanehoan-kevitra nataon'ny Minisitry ny Atitany.
Bilaogera Yasir Imran naneho hevitra momba ny lahatsary:
Mbola tsy voamarina ny antony nahatonga ny fanakanana ny kaonty Adsense, saingy taorian'ny fijerena ity lahatsary ity, inoako fa i Rehman Malik no tompon'andraikitra tamin'ny fandrarana ny Adsense.
Vokatry ny fampitandremana navoakan'ny Minisitry ny Atitany marina tokoa ve izao famaizana natao tamin'ny kaonty adsense izao? Saad Hamid, ikoizana amin'ny bilaogy Teknolojika ao Pakistan, nampitsahatra izany fironan-kevitra izany:
Araka ny nahitako ny hafa, mampalahelo ny mahita fa maro amin'izy ireo no naniry hibilaogy satria voasariky ny fitiavam-bola ary ny vola ihany ary izany no tsy mampitovy ahy amin'izy rehetra. Indrisy fa ny sekoly mitovy amin'izany ihany no manohitra ahy ankehitriny, satria nandritra izao fotoana izao, dia mpanohana hatrany ny ‘hevi-baovao’ (originalité) aho, nitantana sy nanofana olona tsy haka tahaka hevitra aho, tsy haka tahaka ny hafa fa mba hanantena kosa izay zavatra afaka ataony ho azy tsirairay avy. Kanefa tsy mba manana hevi-baovao ireo olona ireo ary mampalahelo fa ho toy izany foana izy ireo.
Amin'ny fikatsahana hahazoana “vola mora”, tranokala marobe no nametraka toromarika amin'ny fomba fitrandrahana ny Adsense, fa tsy latsa-danja ihany koa ny bilaogy sy tranonkala mangala-tahaka teny iditra mba hisintonana mpamaky. Ity misy lahatsary fampianarana izay manome toro-lalana amin'ny fanokafana ny kaonty adsense hahazoana Rs. 500; ohatra iray amin'ireo marobe mameno ny serasera ka mahatonga ny fanakanana avy amin'ny Google.
Badar Khushnood, mpanolotsainan'i Google ao amin'ny firenena, no niditra an-tsehatra, tamin'ny alalan'ny twitter, niaraka tamin'ireo mpamaham-bolongana tezitra hanampy ireo mpamaham-bolongana tsy mpaka tahaka hitakyny kaontiny.
@badar76: Miverina miasa; tsy fantatro hoe hatraiza no ahafahako manampy saingy eo am-pijerena ny lohahevitra momba ny #Pakistan#AdSense niseho vao haingana! #AdSensePK
@badar76: #Pakistan#Bloggers – azafady tohizo miaraka amin'ny devoaranay manokana – amarinina ny maha ara-dalàna ny #AdSense T&C, tahirin'antso, sns. #AdSensePK
Nandritra izany, nanohy ni-tweet ireo bilaogera amin'ny fampiasana teny fototra #AdsensePK:
@noumaan_ : mitohy ny fandrarana ny kaonty Adsense Pakistaney, kaonty vaovao marobe no nofoanana omaly hariva, hatramin'izao, tsy misy antso noraisina. # adsensepk
@taalz: Google Adsense nilaza hoe “Tsy azo ekena ny voaraikitra ao amin'ny tranokala” http://www.PickMore.com ? Fa nahoana? Satria nanoratra zavatra tsy mahaleo tena? #AdsensePK
@harisn: Eny, mbola nofoanan'ny Google Adsense ny kaonty. Namana iray tratran'izany ->@fariZafar. #adsensepk
@atharpk: Karazana Fandrarana #Adsensepk Nitohy. Tsy Misy Fampilazana, Tsy Misy Fanantenana. Tsy ara-dalana tanteraka ny Google manoloana ny mpamoaka lahatsoratra Pakistaney.
Nanomboka nanolotra vahaolana isafidianana tamin'ny Google Adsense kosa ny bilaogera sasany:
@shafiq: Eo am-pitadiavana ny vahaolana isafidianana momba ny adsense noho ny fanapahana faobe ny adsense ao Pakistan Araho ny rohy http://bit.ly/oulpW4#adsensepk
Fitarainana avy amin'ny bilaogera manolo-kevitra fa bilaogy sy tranokala maherin'ny 90% no voakasiky ny fandrarana. Raha nanantena ireo bilaogera fa handinika ny fanapahan-keviny ny google, Saad Hamid kosa namela anay tamin'ity fanamarihana tsara nataony ity:
Raha ny marina! Tsy mahatsiaro kivy aho amin'izany. Efa voarara indray mandeha ny AdSense tao amin'ny Sizlopedia.com ary tamin'izany no nahafantarako fa mandroso ny toe-draharaha, ny zavatra tokony ataonao dia ny hananao fitiavana amin'izay rehetra ataonao. Afaka milaza am-pireharehana aho fa nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fiainan'ny olona ny fahaizako fa tsy noho ny zavatra nataon'ny AdSense tamiko. Mba hamehezana izany amin'ny zava-dehibe mikasika izany, lahatsoratra sasany nosoratako ankehitriny no anisan'ny famakafakana ataon'ny mpianatra ao amin'ny Stanford sy MIT, nanangana, namatsy vola, ary nanohana ny PehliMadad aho- fandraisana andraikitra momba ny asa soa, Nikarakara sy nanohana ny TEDxMargalla aho – konferansa TEDx tokana niseho tao Islamabad hatramin'izao ary mbola mitohy ny dia…
Ny voamenako anankiroa [cents roa]: Ny andro hahitanao ny tena zavatra ankafizinao indrindra, tsy atao olana intsony ny AdSense 🙂 Mahavità soa!
- Avy amin'ny mahery fo an'aterineto tsy mahalala afa-tsy ny tenany
Antenaina fa hirona any amin'ny fanamarihana tsara nataon'i Saad ny tontolon'ny bilaogy rehetra, raha toa ka tohizan'ny Google ny fandinihana ary antenaina koa ny famerenana indray ny kaontin'ireo bilaogera izay manaja ny “tsy nalain-tahaka” ary entanim-pitiavana.